Aalad Casri ah oo kaa caawinaysa inaadan ku dhicin Imtixaanka oo Muqdisho laga soo saaray - Aayaha
Aayaha editorOctober 17, 2018
Bardhig carweedka isgaarsiinta iyo tignoolojiyadda oo markii ugu horreysay abid lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay waxyaabo xiiso leh oo uu ka mid yahay barnaamij lagu magacaabo Naqtiin oo caawinaya ardayda dhigata dugsiyada sare.
Hay’adda Iftiin Foundation oo ka mid ahayd 100 shirkadood oo ka qeyb galay bandhig carweedkaasi ayaa shaaca ka qaadday dhowr tignoolojiyad oo uu ka mid ahaa barnaamij lagu magacaabo Naqtiin oo ku shaqeeya internet-ka.
Naqtiin ayaa ardayda Soomaaliyeed waxay ka heli karaan su’aalo iyo jawaabo ku saabsan culuumta wax barasho ee ilaa heerka dugsiga sare, sida ay BBC-da u sheegeen mas’uuliyiinta hay’addaasi.
Guddoomiyaha Iftiin Foundation oo la hadlay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, oo ka qeyb galay carwada isgaarsiinta iyo Tignoolojiyadda ayaa sheegay iney soo bandhigeen dhowr barnaamij oo kala duwan.
“Runti hay’addeennu waxay carwadan ka heshay fursad ay bulshada ugu soo bandhigto barnaamijyo tignoolojiyad ah oo faa’iido u leh shacabka”, ayuu yiri.
Isagoo sharraxaad naga siinayay sida uu wax tar u leeyahay barnaamijka Naqtiin, ayuu yiri: “Barnaamijkan wuxuu diiradda saarayaa ardayda dugsiyada sare, si ay ugu sahlanaato in duruusti ay qaateen ay u naqtiimiyaan. Waa App, waxayna kala soo dagayaan boga internet-ka ee Naqtiin waxayna ka heli karaan maaddo kasta oo ay u baahanyihiin”.
Dhammaan ardayda ayuu sheegay iney si sahlan uga daalacan karaan cashirrada, su’aalaha iyo jawaabaha ay ka koobanyihiin cutubyada maadooyinka kala duwan ee lagu qaato dugsiyada sare.
Maxaa kallifay in barnaamijkan lagu fakaro?
Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay jirto baahi sababtay in la hindisho barnaamijkan casriga ah ee ardayda loogu tala galay.
“Imtixaanaadkii ay dowladda qaadday sannadkii ugu dambeeyay waxaa ku dhacday arday ay tiradoodu gaareyso 5,000 oo arday, arrintaasna dabcan waxaa sababtay helitaan la’aanta waxyaabo fududeynaya wax barashada iyo diyaarinta imtixaanka” ayuu yiri.
Ardayda wax ka barta dugsiyada kala duwan ee Soomaaliya ayaa isku diiwaan galiyay isticmaalka barnaamijkan ay soo badhigtay hay’adda Iftiin.
Qof walba oo gudaha u gala barnaamijka ayaa dooran kara maaddada uu jecelyahay inuu muraajaceeyo, ka dibna wuxuu ka sii dooran karaa qeybta gaarka ah ee khuseysa cashirrada uu raadinayo.
Barnaamijkan ayaa sidoo kale leh qeyb leyli ah oo uu qofka ku tijaabin karo heerkiisa aqooneed ee ku aaddan su’aalaha.
Bandhig carweedka isgaarsiinta iyo tignoolojiyadda Soomaaliya oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in la soo xiro maanta, waxaana noocyo kala duwan oo horumarka tignoolojiyadda ah ku soo bandhigay shirkado fara badan.
Xafladdii furitaanka ee shalay ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiinta ilaa boqor shirkadood oo ku tartamayay carwada, saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo dadweyne daneynayay iney wax ka ogaadaan tignoolojiyadda casriga ah ee ay Soomaaliya ku sii tallaabsaneyso.
Dadka Isticmaala WhatsApp Oo La Siiyay Digniintii Ugu Cusleyd Si Ay Arintaan Uga Bad-Baadaan